Thwebula Genymotion 2.6.0 – Vessoft
Genymotion – a software sokulingisa uhlelo lokusebenza Android on the computer. Isofthiwe ikuvumela ukuba agijime izicelo noma izinhlelo ezihlukahlukene Android bese usebenzisa isethi standard of nemisebenzi idivayisi yeselula. Genymotion kwenza ukuba uhlele panel navigation, ukushintsha isinqumo isihenqo bese usetha inani asekelwe noma inkumbulo tekusebenta for a umshini virtual. Isofthiwe iqukethe yokunamathisela ngokuhlanganyela kanye amamojula eyakhelwe-ku nezici Wi-Fi, GPS, ikhamera main kanye phambi idivayisi.
Ukulingisa abanye of the uhlelo lokusebenza Android
Ukusekela for amafoni ehlukahlukene kanye izinguqulo Android
Inani elikhulu emulators esakhelwe
Amathuba Wide ukulungisa umshini virtual
Amazwana on Genymotion:
Genymotion Ahlobene software:
English, Français, Deutsch, Italiano... YouWave 3.30
Hambayo Umphathi amadivaysi BlackBerry. Isofthiwe linezincazelo eziningi amathuluzi ngomsebenzi lula nge amadivaysi.
English, Français, Español, Deutsch... MSI Afterburner 4.3.0.9267
Testing Ithuluzi Ukugunda ukulungisa ukuqapha amakhadi ihluzo kusukela Onjiniyela ehlukahlukene. Isofthiwe ikuvumela ukuba ulungise ezinye izilungiselelo futhi wenze computer ihluzo ukushesha.
English, Українська, Français, Español... CheMax 19
Imidlalo Isofthiwe database enkulu CHEATS ukwenza lula ukudlula imidlalo computer. Isofthiwe ikuvumela ukungena amakhodi kanye amaphasiwedi in imidlalo athandwayo.
Isithombe Isofthiwe ukubuka futhi uhlele izithombe. Isofthiwe iqukethe amathuluzi for inqubo batch kwezithombe-skrini, kubanga collage GIF-izithombe.